Kosta Rikà: Fampisehoana, Fitroarana sy Ahiahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2017 15:39 GMT
(Fanamarihana: nivoaka tamin'ny jolay 2008 ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy)
Sary namboarin'i Cristian Cambronero ao amin'ny Fusil de Chispas, lahatsary avy amin'ny olon-tsotra.
Nandefa ny zava-nitranga tamin'ny Fampisehoana tamin'ny Alahady ilay mpanao gazety Cristian Cambronero ao amin'ny bilaogy Kosta Rikàna malaza Fusil de Chispas, notantarainy tamin'izany fa nirotaka ireo tanora ary nanimba ny toeram-pianarana ao amin'ny Oniversite Latina ao an-drenivohitra San José. Nanomboka ny korontana rehefa tsy navela niditra tao amin'ny fampisehoana maimaim-poana ireo olona teo amin'ny 3000, kanefa efa nisy olona 5000 niandry ny fampisehoana tao anatiny. Tezitra noho izany ny sasany tamin'ireo tanora ka nandroba ny tranoben'ny oniversite, nanimba fiara, nanimba fiangonana teny amin'ny manodidina, nandroba, nitorakaraka seza, vato sy biriky.
Nanangona ireo lahatsary avy amin'ny olon-tsotra nampidirina tao amin'nyYouTube, izay mandrakitra ny fotoanan'ny rotaka ihany koa i Cristian, lahatsary nalaina tamin'ny kamera finday ny ankamaroany.
Mampiseho ny zava-nitranga tao amin'ny toerana nanaovana ny fampisehoana ity lahatsary mazava ity. Voalaza fa olona teo amin'ny 5000 teo no tao anatiny. Jereo fotsiny ny sary mba hahitana fa mety ho goavana kokoa ny loza niseho. Naka sary nandritra ny fotoana nitoraham-bato, biriky ary koa seza tao amin'ny varavarakelin'ny Oniversite ity mpisera ity. Manerana ny toeran'i Lourdes of Montes de Oca ny rotaka, araka ny hita eto. Niala ny toerana ireo mpijery, maro tamin'izy ireo no niharan'ny etona mandatsa-dranomaso. Afaka ora vitsy, mbola misy ireo lahatsary maro hipoitra eto.
Ao anatin'ny fanehoan-kevitra, maro ireo niezaka namaly ny antony nitrangan'ity loza ity. Ny fanontaniana lehibe tao an-tsain'ny tsirairay dia hoe, nahoana? Inona no anton'izao haromotana izao noho ny tsy famelàna hiditra tao amin'ny fampisehoana maimaim-poana? Tafahoatra ny fahasimbana raha oharina amin'ny zavatra nahatonga ny loza. Maro ireo nanome tsiny ny zava-misy fa nomena zavatra (fampisehoana) maimaim-poana ireo tanora ireo ka sarotra ho azy ireo ny handà izany. Ny hafa kosa manome tsiny ny zava-misy fa maro tamin'ireo tanora ireo no te hijery fampisehoana maimaim-poana satria tsy mba afaka mijery hetsika ara-kolontsaina hafa noho ny tsy fananam-bola. Mihevitra indray ny hafa fa saranga ambony sy manankarena ireo mpirotaka, ny hafa milaza fa avy amin'ny faritra ara-toekarena mahantra ao amin'ny firenena izy ireo, na koa avy amin'ny vondrona mpankafy ekipa mpilalao baolina kitra, fantatra amin'ny hoe “barras” mahery setra.
Ireto manaraka ireto lahatsary roa mampiseho ireo varavarankely voatoraka tao amin'ny oniversite, ary tsy mba nahitana polisy.
Ity lahatsary ity kosa mampiseho ireo tanora mihazakazaka ao amin'ny toeran'ny fampisehoana, manafina ny endrik'izy ireo mba hiarovan-tena amin'ny etona mandatsa-dranomaso atsipy ao anatiny.